I-China Jacketed Ukushisa itanki lokuxuba ithangi Umkhiqizi kanye Nomthengisi | Qiangzhong
Ijacketed yokuxuba yokushisa kagesi
Sisebenza ngokukhiqiza ukudla nemishini yezokwelapha, futhi sazi kangcono!
Isetshenziswa kakhulu ezimbonini zokudla, iziphuzo, ezokwenza imithi, ezamakhemikhali zansuku zonke, ezophethiloli nezamakhemikhali.
Tank Umzimba Diamete
Ijubane Lokuxhuba (r / iminithi)
Isakhiwo Sesisetshenziswa: ukuvulwa kabili kukhava oyisicaba ephezulu, phansi okuyisicaba, ukukhipha phansi, ukuma mpo kwezinyawo ezintathu.Imisebenzi ephambili yethangi lokuxuba kagesi: ukufudumeza (ukufudumeza okuphakathi kwejeketi ngama-heater, ukudlulisa amandla okushisa, nangokungaqondile ukufudumeza impahla ethangini, ngokulawula ukushisa okuzenzakalelayo), ukufudumeza ukushisa, ukupholisa nokugqugquzela.
• Uqinisa lusebenza emachwebeni, bushelelezi futhi kulula ukuluhlanza, futhi kulula nokuluhlanganisa nokuluqaqa.
• Kulula ukuyifaka nokuyisebenzisa: vele uxhume ikhebula lamandla elidingekayo (i-380V / izigaba ezintathu-zocingo ezine) esigungwini sebhokisi lokulawula ugesi, bese ufaka izinto zokwakha nokushisa ngaphakathi kwethangi nejakhethi ngokulandelana.
• Insimbi engagqwali i-304 / 316L isetshenziselwa i-liner yethangi nezingxenye ezithintana nalolo lwazi. Umzimba osele wethangi nawo wenziwe ngensimbi engagqwali engu-304.
• Kokubili ingaphakathi nengaphandle liyisibuko esipholishiwe (uburhabavu Ra <0.4um), buhle futhi buhle.
• Kufakwa indida ehambayo ethangini ukuhlangabezana nezidingo zokuxubana nezishukumisayo, futhi ayikho indawo yokuhlanza efile. Kuyinto elula kakhulu ukuyisusa nokuyigeza.
• Ukuxuba ngesivinini esinqunyiwe noma ngesivinini esiguqukayo, ukuhlangabezana nezidingo zokulayisha okuhlukile nemingcele yenqubo ehlukile yokuphazamiseka (kungukulawula imvamisa, ukuboniswa kwesikhathi sangempela kwe-inthanethi kwejubane elinyakazayo, imvamisa yokukhipha, okukhiphayo kwamanje, njll).
• Isimo sokusebenza kwe-Agitator: impahla ethangini ixutshwe ngokushesha nangokulinganayo, umthwalo wohlelo lokudlulisa olushukumisayo luhamba kahle, nomsindo wokusebenza komthwalo <40dB (A) (ngaphansi kwezinga likazwelonke le- <75dB (A), okunciphisa kakhulu ukungcola komsindo kwaselebhu.
• I-agitator shaft seal ihlanzekile, ayikwazi ukumelana nezingubo futhi ayikwazi ukumelana nengcindezi, ephephile futhi enokwethenjelwa.
• Inemishini ekhethekile yokuvimbela isinciphisi singcolise izinto ezingaphakathi kwethangi uma kukhona ukuvuza kukawoyela, kuphephe kakhulu futhi kunokwethenjelwa.
Langaphambilini Phezulu ngaphakathi nangaphansi kwepompo ye-rotor
Olandelayo: Isigaxa sokuxuba ezansi esine-viscosity ephezulu ehambisa isikulufa sephampu
Ithangi lokuxuba lensimbi engagqwali elinezingqimba ezintathu
Kuqondile ukuvulwa kwethangi lokuxuba insimbi engagqwali
I-Tank Fermentation Tank
Ijubane Lokuxuba Ithangi Eliphezulu
Ukuxubana nokuqhuma kwethangi lokuqhuma
Ithangi lokuvutshelwa lomanyolo ongu-1000L